Ny Trailer 'Against the Ice' an'ny Netflix dia manambara tantara marina mampahory momba ny hanoanana, fanafihana orsa ary hadalana
Home Vaovao Mahafaly Fialam-boly Ny Trailer 'Against the Ice' an'ny Netflix dia manambara tantara tena mampahory momba ny hanoanana, fanafihana orsa ary hadalana
Tantara marina momba ny fahavelomana amin'ny toe-javatra tsy azo iainana
by Trey Hilburn III Janoary 14, 2022 1,055 hevitra
Manohitra ny ranomandry mitantara ny tena tantaran'ny fahavelomana mafy any Groenlandy. Ny diany dia natao mba hanaporofoana ny teoria fa tany roa i Greenland. Mazava ho azy fa nahafaty olona ireo zava-nitranga nanaraka an’io ampahany manan-danja teo amin’ny tantara ara-jeografika io. Naharitra ela kokoa noho ny nampoizina ny dia niverina tany amin’ilay sambo nokasaina hitondra an’ireo lehilahy ireo hiala amin’ilay faritra ary nisedra olana maro. Izany dia mitarika amin'ny ady mahatsiravina ho an'ny fahavelomana sy ny bera polar izay noana toy ny dia.
Ny synopsis ho an'ny Manohitra ny ranomandry mandeha toy izao:
Tamin'ny 1909, nanandrana nanaporofo ny fitakian'i Etazonia an'i Groenlandy Avaratra atsinanana ny Fiaramanidina Arktika any Danemark notarihan'ny Kapiteny Ejnar Mikkelsen (Nikolaj Coster-Waldau). Nifototra tamin'ny fiheverana fa nozaraina tany roa samy hafa i Greenland. Nandao ny ekipany niaraka tamin'ny sambo i Mikkelsen, dia nandeha niampita ny ranomandry niaraka tamin'i Iver Iversen (Joe Cole) tsy ampy traikefa. Nahomby izy roa lahy nahita ny porofo fa nosy iray i Groenlandy, fa ny fiverenana any an-tsambo dia maharitra ela kokoa ary sarotra lavitra noho ny noeritreretina. Niady tamin'ny hanoanana mafy, ny havizanana ary ny fanafihan'ny bera polar, dia tonga ihany izy ireo nahita ny sambony potika tao anaty ranomandry ary nilaozan'ny toby. Nanantena ny ho voavonjy izy ireo, ka tsy maintsy miady izao mba ho velona. Rehefa mihalava ny andro, manomboka mihamalemy ny fisainan'izy ireo amin'ny zava-misy, miteraka tsy fahatokisana sy paranoia, cocktail mampidi-doza amin'ny tolona ho amin'ny fahaveloman'izy ireo. Ny Again the Ice dia tantara marina momba ny fisakaizana, ny fitiavana ary ny hery mampitolagaga amin'ny fiarahana.
Manohitra ny ranomandry midina amin'ny Netflix manomboka ny 2 martsa.